Saliid saytuunka,avocado iyo looska waxaad ka heli cimri dherer iyo caafimaad wanaagsan - Horn Future
Waxa ay tahay sida fudud ee xal sixir ah lagu helo oo ah cimri dherer caafimaad ku lamaan yahay,laga yaabaa in uu gacantaada kujiro,laakiinse aad moogan tahay,daraasad cusub oo dhawaan daaha laga fayday ayaa sheegtay in xalka sixirka ah ee nolol caafimaad oo cimri dheer leh ay ku jirto saliid saytuun ah, midhaha looska iyo avocado,qaybahan oo inta badan laga helo aqalada iyada oo aanan la ogayn faa’iidooyinka yaabka leh ee kujira.
Cilmi baadhayaal katirsan jaamacada(Stanford University ) ee Maraykanka ayaa faahfaahiyay, jiritaanka tiro badan oo ah dufanka loo yaqaano( monounsaturated) ee laga helo saliid saytuun ka, taas oo ka caawisa dadka inay gaadhaan da’da 100 jirka iyaka oo leh caafimaad wanaagsan, marka lagu daro in dufankani sidoo kale uu ku jiro midhaha avocado iyo looska, kaas oo ah dufanka dabiiciga ah.
Cilmi baadhayaalkan ayaa waxa ay aaminsan yihiin in dufankani uu ilaaliyo unugyada masuulka ka ah muuqaalada gabowga laakiinse waxa ay ku talinayaan in loo cuno si dhexdhexaad ah sababta oo ah waxa ay sababi karaan korodh keena miisaan taas oo keeni karta dhibaatooyin caafimaad oo kale.
Natiijooyinkan ayaa waxa ay yimaadeen yimid kadib tijaabooyin lagu sameeyay dirxiga wareeg ah, halkaas oo lagu quudin jiray intii lagu guda jiray daraasaddan dufanka loo yaqaano (monounsaturated fatty acids),inkasta oo dirxigan uu helay miisaan aad badan,hadana waxa uu noolaaday muddo 2 maalmood ka badan isku celceliska da’diisa, taas oo aan ka badnayn 2 todobaad.
Daraasadan ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamtay faa’iidooyinka waaweyn ee ay gaarka ku yihiin saliid saytuunka , avocado iyo looska,gaar ahaan ka hortagga halista dhimashada degdega ah, cudurada wadnaha iyo macaanka.
Dhiniciisa, horjoogaha daraasadan Professor Ann Brunier ayaa sidoo kale sheegay in daraasadan ay macnaynayso sababta ay ugu raaxaystaan dadka ku nool koonfurta Yurub ee cuna saliid saytuunka oo ah hab-dhaqanka cunto ee Mediterranean ka oo leh cimri dheer iyo hoos u dhaca heerka cudurada wadnaha inkastoo oo ay cunaan dufan badan.
Cilmibaadhayaasha ayaa sidoo kale waxa ay tilmaameen in saliid saytuun ah, avocado iyo looska ay yihiin cuntooyinka adduunka ugu mudan/ fiican kuwaas oo ay ku jirto maadada loo yaqaano (Oleocanthal )ee (antioxidant) taas oo yareeysa bararka jidhka.
« Masuulka siyaasadda dibada Midowga Yurub oo sheegtay in Britain ay seegi doonto wax badan	» Fadeexad:Muuqaal qarsoodi ah oo la faafiyay oo muujinaya dad rayid ah oo toogasho lagu dilay oo dilaaga Sisi hore ugu tilmaamay aragagixiso+daawo